कहाँबाट आउँछ सेयरबजारमा दैनिक २ अर्ब ? — Arthatantra.com
Arthatantra.com > विशेष > कहाँबाट आउँछ सेयरबजारमा दैनिक २ अर्ब ?
पछिल्ला केही सातायता सेयरबजारको दैनिक कारोबार नै २ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ । सेयरबजारमा यति ठूलो रकम कहाँबाट आइरहेको छ ?
प्रकाशितः २०७३ असार ९
२०७३ असार ९ गते १०:५० मा प्रकाशित
६० लाख अग्रिम दाइजो लिएर डाक्टर फरार !
सानिमा माइ हाइड्रोले ल्यायो शतप्रतिशत सेयर !
आगामी आवका लागि दश खर्ब ४८ अर्ब बजेट
नयाँ शहर निर्माणको लागि आयो कार्ययोजना
बैंकको ८०% हकप्रद आजबाट खुल्यो,कहाँ–कहाँबाट आवेदन दिने ? पढ्नुहोस् !